स्व. अभिनेता इरफान खानको परिवारमा को-को छन ? - स्व. अभिनेता इरफान खानको परिवारमा को-को छन ? -
स्व. अभिनेता इरफान खानको परिवारमा को-को छन ?
उज्यालो प्रतिनिधि १८ बैशाख २०७७, बिहीबार उज्यालो फोकस
काठमाण्डौ । बलिउडका दिग्गज इरफान खान २०१८ देखि क्यान्सरको लडाई लड्दै बुधबार मुम्बईको अस्पतालमा मृत्यु भयो। इरफानको मृत्युले सम्पूर्ण बलिउड स्तब्ध छ। सम्पूर्ण फिल्म उद्योगमा शोकको लहर छ। वास्तवमा, इरफानलाई सोमबार अचानक मुम्बईको कोकिलाबेन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। भनिन्थ्यो कि उनलाई कोलोन संक्रमण भएको थियो, तर उनको मृत्युको खबर बुधवार बाहिर आयो।
इरफान खान, जो ५३ वर्षको उमेरमा संसार छोड्नुभयो, उहाँकी श्रीमती सुतापा सिकदर, जेठो छोरा बबिल खान, कान्छो छोरा अयान खान, बहिनी रुकसाना बेगम, जेठो भाई इमरान खान र कान्छो भाई सलमान खान हुनुहुन्छ । उनकी आमा सईदा बेगमको पनि जयपुरमा ९५ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो र देशमा तालाबन्दीका कारण उहाँ आफ्नी आमाको अन्त्येष्टिमा उपस्थित हुन सकेनन् ।
पहिलो फिल्म निर्देशक शुजित सरकारले ट्वीटको माध्यमबाट यो जानकारी दिए। चाँडै, आधिकारिक बयान पनि बाहिर आयो। यस भनाइले भन्यो, ‘इरफान एक बलियो आत्मा थिए, जसले अन्तसम्म लडे र सधैं आफुलाई नजिक आउने जो कोहीलाई प्रेरित गरे।
एक दुर्लभ क्यान्सरको खबरको साथ २०१८ देखी उनले यससँगै आएका धेरै लडाईहरू लडे। उहाँको प्रेमले घेरिएको, आफ्नो परिवारको लागि, जसलाई उनले धेरै हेरचाह गरे, उनले वास्तवमा आफ्नो विरासत छोडे र स्वर्गमा गए। हामी सबै उसको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्दछौं।
कराँते सिक्न गएकी बालिका गुरुबाटै ३ वर्षदेखि बलात्कृत
वर्तमान सरकारले नागरिकले खोजेजस्तो गति पक्रन सकेन :
महोत्तरीको विभिन्न तीन स्थानीय तहमा एघार घर भत्किँदा